Khaladaadka Trump Oo Awood Siinaya Musharrax Daciifka ah Ee Kasoo Horjeeda | Gaaroodi News
Khaladaadka Trump Oo Awood Siinaya Musharrax Daciifka ah Ee Kasoo Horjeeda
July 30, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Way iska caddeyd in Joe Biden, oo aad daciif u ahaa markii uu galayay doorashooyinkii musharraxnimada ee xisbigiisa dhexdiisa, uu awood ku yeelan doono guuldarrooyinka Trump, sidaasna uu fursad ugu heli karo in uu ku guuleysto xilka madaxweynaha.
Nick Bryant, oo ah wakiil wareedka BBC-da ee magaalada New York, ayaa falladan ka diyaariyay sida uu musharraxa doorashada madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraaddiga uga faa’iideysanayo khaladaadka uu sameynayo madaxweyne Trump.
Saaxiibtinnimada uu Biden ka sameysanayay dadka shacabka ah dhoollacaddeyntiisa ayaa taageero badan usoo jiiday.
Xisbigiisa dhexdiisa awood ugama uusan lahayn sidii ay taageerada u heysatay Hillary Clinton, haddana sidaasoo ay tahay ma uusan rajo dhigin.
Xitaa marka uu dadweynaha la hadlayo, 77 jirkan hadalladiisu ma ahayn kuwo soo jiidasho leh, oo shacabka ku dhiirrigalinaya inay si xad-dhaaf ah u taageeraan. Doorashooyinkii ugu horreeyay ee xisbiga dhexdiisa ah, Biden uma aysan wanaagsaneyn
30 sano oo aan tabinayay siyaasadda Mareykanka, Biden waa siyaasigii ugu tabarta yaraa ee aan abid ako, oo xitaa ka daran musharraxii 2016-kii taagnaa ee Jeb Bush. Ninkaas oo ahaa Barasaabkii hore ee Florida wuxuu ugu yaraan dhammeystiri karay jumlad hadal ah, xitaa haddii aysan cidna u sacbineynin marka uu afkiisa ka dhammeeyo.
Qeybihii ugu horreeyay ee isreebreebka doorashadii xisbiga Dimuqraaddiga dhexdiisa, Biden wuxuu u muuqday mid aan heli doonin tiradii loo baahnaa, waxaana jiray musharraxiin kale oo ka horreeyay.
Balse wuxuu guulo waaweyn ka gaaray isu soo baxyadii codeynta ee dhacay maalintii loo yaqaannay “Super Tuesday”.
Dadka falanqeynayay siyaasadda iyo wararkii tartanka musharraxiinta ayaa aad ula yaabay isbaddalkii lama filaanka ahaa horseeday in uu hanto kalsoonida xisbigiisa.
Hase yeeshee, taageeradii ugu horreysay ee la isku halleyn karo waxay u billaabatay markii uu soo ifbaxay cudurka Covid-19, xayiraddana lasoo rogay.
Mid ka mid ah eedeymaha ugu waaweyn ee lagu dhaleeceyn jiray, sharaftiisana lagu waxyeelleyn jiray waxay ahayd inuu dumarka xaggooda u janjeero ama uu mar walba jecel yahay inuu ku xadgudbo.
Laakiin markii amar lagu soo saaray in dadka ay kala fogaadaan, si cudurka faafitaankiisa looga hortago, Biden wuxuu si toos ah uga badbaaday inuu mar kale dumarka si toos ah u taabto.
Taas waxaa kasii muhiimsaneyd in cudurka safmarka ah uu soo afjaray colaaddii siyaasadeed ee ka dhaxeysay Biden iyo mid ka mid ah musharraxiintii ugu cadcaddaa ee ku heystay kalsoonida xisbigiisa, Bernie Sanders.
Labada siyaasi ayaa heshiis ku gaaray inay wada shaqeeyaan. Waxyaabaha ay isku afgarteen waxaa ka mid ah in la hirgaliyo qaar ka mid ah ajandeyaashii uu Sanders u ol’oleynayay, sida in sare loo qaado, mudnaan gooni ahna la siiyo adeegyada caafimaadka ee dadka waayeelka ah.
Taasi waxay sababtay in Biden uu hanto taageerada waayeel farabadan oo markii hore la safnaa Trump.
Waxyaabaha kale ee uu Joe Biden daciif ku ahaa waxaa ka mid ah in mar walba lagu dhaliili jiray awooddiisa dhinaca maskaxda oo liidata.
Markii uu doorashada kursiga Senate-ka ku guuleystay sanadkii 1972-kii, wuxuu dhibaato weyn oo dhanka maskaxda ah kala kulmay geerida xaaskiisii, Neilia iyo gabadhiisa – oo markaas 13 bilood jirtay, Naomi.
Labadooduba waxay ku geeriyoodeen shil gaari.
Kaddib, sannadkii 2015-kii wuxuu goob joog u ahaa geerida wiilkiisa Beau, oo shilkaas ka badbaaday, balse u dhintay nooc naadir ah oo ka mid ah cudurka kansarka.
Biden waa nin mar walba loo dhimriyo, wuxuuna dareemayaa xanuunka ay qabaan in badan oo ka mid ah 140,000 qoys oo uu saameeyay cudurka coronavirus. Biden oo la jooga xaaskiisii koowaad, Neilia iyo wiilkiisa Hunter, sanadkii 1972
Ilaa hadda, ma xuma rajada Biden, marka loo eego khaladaadka uu sameynayo Trump iyo guuldarrooyinka uu kala kulmayo baahida shacabka.
Mr Tump waxaa saameyn weyn ku yeeshay sidii uu u wajahay xakameynta iyo la tacaalidda cudurka Covid-19, oo dad badan ka dilay Mareykanka.
Dhammaan siyaasiyiinta ugu waaweyn ee xisbiga Dimuqraaddigu waxay hadda xooggooda isugu geynayaan sidii ay xilka madaxweynaha ugala wareegi lahaayeen Donald Trump. Biden iyo wiilkiisa Beau oo geeriyooday 2015
Tan iyo sanadkii 1980-kii, hal madaxweyne oo xilka haya kaliya, oo ahaa George Herbert Walker Bush, ayaa ku guul darreystay in mar labaad lasoo dooran waayo. Dhammaan madaxweyneyaashii kale ee muddadaas soo maray Mareykanka mid walba wuxuu xukunka heystay 8 sano.
Xitaa muddadii ka dambeysay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo ah intii u dhaxeysay 1945-kii ilaa 1980-kii, markii uu hal madaxweyne oo kaliya muddadiisa xilka labada jeer dhammeystay, labo madaxweyne oo kaliya – oo kala ahaa Gerald Ford and Jimmy Carter – ayaa mar labaad dib loo soo dooran waayay.
Guul darrooyinka hoos u dhigaya Trump waxaa ka mid ah in dad badan ay aaminsan yihiin in uu sabab u yahay dhaqaale xumada ka dhalatay cudurka safmarka ah, maadaama uu markii ugu horreysay si dhab ah u qaadan waayay khatartiisa.